Author: Mem Goltisida
Kuwa loo hayso dembiyada waxa ay xaq u leeyihiin in laga sooco dadka waaweyn ee la xiran, laga difaaco tacaddiyada galmada, waxbarasho la siiyo, iyo waxyaabo kale. Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6, 7, 8 iyo naad, kadibna guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ay aadi doonaan gobollada dalka iyadoo ay ku wehlinayaan xildhibaanada gobolkaas ka soo jeeda si shacabka loogala tashado arrimaha dib u eegista dastuurka kadibna waxaa dastuurka lagu soo celin doonaa baarlamaanka si qodob walba xildhibaan u ansixiyaan.
Haseyeeshee waxaa la dayacay ama dib loo dhigay dib u habayn muhiim ahayd ee lasamayn lahaa, ayadoo la fiirinayay dano siyaasadeed. Mudada kooban, dowladda Soomaaliya, gaar ahaan baarlamaanka, iyo wasaaradaha caddaalada iyo amniga gudaha waa in ay: Maamulladii hore ee Soomaaliya iyo howlwadaagooda caalamiga ah ayaa aqoonsaday meelaha u baahan dib u habaynta si loo wanaajiyo xaaladda xuquuqda aadanaha, oo ay ka mid tahay Fulinta Qorshe Howleedka Xuquuqda Aadanaha eeiyo in ay garawsadeen baahida loo qabo in arintaasi lagala shaqeeyo dhammaan wasaaradaha iyo waaxaha.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Qodobka 3aad — Sarraynta Dastuurka 1. Dastuurka Soomaaliya kiiQod. Garsoorka oo Lagu Sameeyo Dib dastyurka habayn Dheeraad ah oo Wax ku ool ah Inkastoo ay si shaacbaxsan u ballanqaadeen dib u habaynta garsoorka, ayaa haddana maamulladii hore waxa ay si weyn ugu tiirsanaayeen maxkamadda ciidanka ee dalka, si ay u qaado kiisaska la xiriira ammaanka qaranka.
Marka uma jeedo waxa dadkeenu ay kitaabo kale u doonayaan. Abril waxa qaba qareen kale oo Itoobiyaan ah, waxaana loo xilsaaray labadooda inay soo diyaariyaan dastuurka Soomaaliya ee ay kusoo qoreen, in guurka aan loo aqoonsan kaliya midka dhex mara nin iyo naag Waxaana cadaatay hada in lasoo bandhigay Dastuurkii runta ahaa ee ay qortay gabadha Jamayka u dhalatay iyo ninkeeda Itoobiyaanka ah, waxana hada la qorshaynayaa in Dastuurka Soomaaliya lagu daro in diinta Kirishtaanku ay ka mid tahay diimaha rasmiga ah ee Soomaaliya.
Xataa garsoor qaran oo awood leh ayaan keligii wax ka qaban karin dhibaatadaasi, balse waxa uu u baahnaan doonaa in ay xoojiyaan dadaallo caalami ah. AMISOM ayaa ballanqaaday in ay baarayso dhacdaasi, waxaana ay qaaday waraysiyo, balse natiijada ayaan ilaa hadda la shaacin.
Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Waxaa si aad ah u dsatuurka hormarka la taaban karo ee laga sameeyay ilaalinta, caddaalada iyo in dhibbanayaasha horay ula kulmay tacaddiyada ay helaan xaqooda kuwa haatan khatarta ugu jirana laga difaaco.
Yaa dhalay waxan ula jeedaa yaa qoray. Tan iyo bishii Novemberugu yaraan 60, oo qof ayaa xoog looga raray xeryahooda. Xukuumadda iyo baarlamaanka waa in ay: Dowladda cusub ee Soomaaliya ka dhalatay bishii Maarsoayaa waxa cuaub fursad muhiim ah u tahay wax ka qabashada dhibaatooyin badan ee haysta xuquuqda aadanaha ee dalka, ayadoo kaashanaysa taageerada caalamiga ah.
Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1. Qeyb kasta oo ka tirsan garsoorka waa in ay si wax ku ool ah u xallin kartaa ugana jawaabi kartaa xadgudubyada galmada, ayadoo maanka lagu hayo caqabadaha ay dumarka iyo gabdhaha la kulmaan marka ay doonayaan caddaalad, oo ay ka midka yihiin fuquuq iyo dhibaatayn. Gabadha qortay dastuurka Soomaaliya waxay rumaysan tahay dhaqdhaqaaqa diiniga ah ee la yiraahdo Rastafari.
Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Ka caawisaa dadka aan awoodin ama aan rabin in ay ku laabtaan deegaannadooda, sidii ay u degi lahaayeen magaalooyinka waayen oo ay dadka u dhexgeli lahaayeen, ayadoo siinaysa hooy asaasi ah. Hormariyaan sidii ay dumarka uga qeybgali lahaayeen siyaasadda, ayagoo dhisaya awoodda musharraxiinta haweenka ah, adeegsanayana qaabab ay ka mid yihiin maareynta ololaha ama tababarka hogaaminta; Taageeraan barnaamijta wacyi-gelinta codbixiyayaasha, gaar ahaa kuwa lagu beegsanayo baahidda macluumaad ee codbixiyayaasha dumarka ah; iyo, Taageeraan waxbaridda gabdhaha, ayagoo wax ka qabanaya dhaqanka fuquuqa ah ee ku aaddan tacliinta hablaha, gaar ahaan ayagoo adeegsanaya ololaha waxbarashada dadweynaha.
Cidda qortay Dastuurka qabyo-qoraalka Soomaaliya loo diyaariyay. Waxaan ku dhiiragelinaynaa dowladda, si tallaabo wanaagsan loogu qaado dhanka ku talinta istaraatijiyadda caddaalada kumeelgaarka ah iyo tallaabooyinka lagu wanaajinayo isla xisaabtanka in ay:.
Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Most Viewed May 9, Tusaale ahaan, horaantiimaamulka Puntland ayaa ogolaaday in koox dhalinyaro ah oo laba gabdhood ku kufsaday degmada Galdogob lagu maxkamadeeyo shareecadda Islaamka. Qorshayaasha hadda socda ee ku aaddan qaab-dhismeedka ammaanka qaran ee Soomaaliya ayaa iska indha tiray laamaha sirdoonka. Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: More foreign airlines to launch flights to Somalia amid improved security: Dastuurka qabyo-qoraalka oo maanta horyaala odayaasha Muqdisho lagu aruuriyay waxaa qortay gabar u dhalatay wadanka Jamayka oo magaceeda lagu sheegay Abril.
Email dsstuurka Phone Password Forgot account? Ciidamada ammaanka ayaa garaacay oo u hanjabay kuwa diiday in ay xeryahaasi ka guuraan, waxaana ay cagaf-cagaf ku burburiyeen guryo iyo dukaamo.